Tijaabadii Maraykanka ee saxawaadka Ciraaq ma loo soo rari karaa Soomaliya? mase laga hir gein karaa? (maqaal) | Nabadi caadalad ayaa kaa horresa
Tijaabadii Maraykanka ee saxawaadka Ciraaq ma loo soo rari karaa Soomaliya? mase laga hir gein karaa? (maqaal)	Seteembar 26, 2008
Posted by spiritualphilantropy in Commentary & Reports, Islamic Perspectives.
Dagaalka caalimiga ah ee ka dhexeeya muslimiinta (Mujaahidiinta) iyo Gaalada saliibiyiinta uu hor kacayo Buushka Mareykanka ayaa 7jirsatay waxayna si rasmi ah uga istaagtay Afghanistaan,Ciraaq iyo soomaaliya marka laga reebo meela kaloo si goos goos ah uu uga socdo dagaalkaasi.
Saliibiyiinta iyo Yahuuda ayaa dhamaantood isu kaashaday dagaalka ay kula jiraan muslimiinta xili dowladihii muslimka sheeganayay ay ka soo safteen safka saliibiyiinta qalinkana ku duugeen la dagaalanka (Argagixisada) oo loola jeedo muslimiinta diintooda ku dhegan.
Gaalada ayaa ku fashilmay dagaalka tooska ah wax natiija ahna ka keeni waayey inkastoo ay isugu geeyeen dhamaan awoodooda, Ciraaq waxaa la geeyey ciidamo ka socda 36 dowladood oo saliibiyiin ah AFGHANISTAANNA waxaa la geeyey Ciidamo ka socda 26 dowladood oo Saliibiyiin ah, waxaa garab socday dagaalka afka ah iyo warbaahinta haddana wax guul ah lagama gaarin.
Soomaaliya waxay aheyd nooc dagaal cusub oo Mareykanku ka damacsanaa inuu tijaabo cusub geliyo qorshe cusub waa nooca dagaalka loo yaqaan (Bil wakaala) oo loola jeedo in Mareykanku uu bixiyo dhamaan kharshka ku baxaaya dagaalka balse uu adeegsado ciidamo aan Mareykan aheyn.
Itoobiya ayaa la soo geliyey Soomaaliya, sanad iyo sideed bilood ka dib Mareykan iyo Itoobiya waxay qiranayaan inaysan wax natiijo ah ka keeni karin dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta Soomaaliya suura galna aysan aheyn in laga adkaado sida hadda ay wax ku socdaan.
Haddaba waa maxay qorshaha cusub ee gaaladu ku fekereyso inay mujaahidiinta kaga adkaato?
Ciraaq ayaa ah tusaale fiican oo la dhihi karo gaalada qorshaha ay u adeegsadeen mujaahidiinta waa uu najaxay qeyb ahaan in kastoon la wada dhihi karin guul ayaa laga gaaray.
Ciraaq waxaa la adeegsaday dad ku caanbaxay magac diimeed laguna yaqaanay inay hormuud ka yihiin ururo islaami ah oo qaarkood jihaad sheegan jiray kana qeyb qaatay dagaalkii lagula jirya xulafada Mareykanka sida Aljeyshul islaami iyo Al-xizbul islaami iyo qabaa,il la kiciyey ka dibna laga horgeeyey mujaahdiinta gaar ahaan muhaajiriinta si ay u gumaadaan uga saaraan deegaamadooda.
In kastoo ay dowladda islaamiga ee Ciraaq iyo Ciidama Ansaar al-islaam si xoog leh uga hortageen kooxahii la heshiiyey Mareykanka oo in badan ay madaxa ka gureen xubnahii hogaaminayey Saxwada haddana waxaan la dafiri karin inay dib u celiyeen jihaadkii ciraaq hoosna u dhigeen howlgaladii ka dhanka ahaa xulafada Mareykanka dhib badana ay soo gaarsiyeen hab socodka jihaadka Ciraaq.
Hadaba su,aasha meesha taalaa waxay tahay suura gal ma tahay Tijaabadaas in loo soo raro Soomaaliya amaba lagu dabaqo mujaahidiinta Soomaaliyeed? mase jiraan dad u heelan inay qaadaan Calanka saxaawaadka? mala dhihi karaa waxaa socda abaabulo iyo saasaan laga dheehan karo qorshaha gaaladu ay ka damacsantahay Soomaaliya waqtiga nagu soo aadan? waa ayo cidda ay Maraykanku adeegsanayaan xiliga nagu soo aadan?.
Jawaabta waxaan u deynayaa dad weynaha balse waxaan rabaa inaan tilmaamo dhowr war bixin oo ay gaaladu ka diyaariyeen arintaas.
1. Taqriirkii u danbeeyey ee ay nashrisay xarunta cilmi baarista (Rand) ayaa lagu cadeeyey qorshaha cusub ee saliibiyiinta ayagoo si toos ah u tilmaamay inay ka bixi doonaan dagaalka tooska ah una bedeli doonaan dagaal qarsoon ayagoo adeegsanaya qunyar socodka macaga diimeed lagu yaqaan.
2. BBC-da ayaa laga sii daayey taqriir labaad oo looga waramaayey qorshaha mareykanaka ee soomaaliya waxaa lagu cadeeyey in ururka dib u xureynta loo adeegsan doono si looga takhaluso xagjirka diimeed ee soomaaliya ka jira.
3. David shin oo ah dublumaasi Mareykan ah oo arimaha geeska Afrikana khabiir ku ah ayaa sheegay in qaabka kaliya ee ay kaga bixi karaan dhiiqada ay lugaha la galeen ay tahay in la dedejiyo barnaamijka dib u heshiisiinta qunyar socodka iyo kooxda C/laahi Yuusuf.
Waxaa intaas dheer dadaalka isa soo taraya ee ay ku bixineyso qaramada midoobay isku dhafka (UDS) ta iyo Kooxda Ridada dhinca kale waxaa muuqaneysa in diyaar garow xoog leh uu ka muuqdo xubnaha hogaamiya (UDS) inay buuxiyaan kaalinta saxawaatka, durba waxay bilaabeen inay qortaan maleeshiyaad qabaa,il ah waxay wadaan isku day inay kasbadaan qabaa,il badan kana horkeenaan mujaahidiinta, waxay bilaabeen inay cambaareeyaan mujaahidiinta iyo howlaha ay qabnayaan ayadoo ujeedada ay tahay inay iska horkeenaan mujaahidiinta iyo shacabaka.
Balse xaqiiqada aan la dhaafi karin ayaa ah fashal degdeg ah oo laga filan karo dhamaan isku dayada UDS iyo Cidda maal gelinaysa waayo waxay doonayaan inay soo celiyaan tajrubo laga dheragsanyahay oo horay loogu dabaqay goobo jihaad muslimiintana ay ka digtoonyihiin
Allaah ayaan ka magangalnay shar wadayaasha iyo sharta ay maleegayaan.
Allaah waxaan weydiisaneynaa inuu xaqa na tuso Raacidiisana nagu arzaaqo Baadilkana na tuso oo naga fogeeyo.
1.	tiitiin - Seteembar 26, 2008
waa run sheekadaan oo gaaladu waxey rajeen dagaal hooseed ,,,,hadiise aan muslim saliima nahey waxaan alle ka baryaa inuu xumaanta eynala rabaan ayaga ku celiyo,,,raga soooomaaliyeed ee qurbaha ku nooolna dib u laabtaan oo eey difaacaan ,,,dalkooda hooyo ee sharafta leh ,,iyo diintooda karaamaha badan,,,,,,,,,illaahoow munaafiqiinta shartooda namooti adigaan magantaada nahaye,,,aamiin ,,,,,,,,gabar soomaaliyeed.